ဒေါက်တာ ဗိုက်ကလေး www.drbikalay.com " ပါကင် " ( စ/ဆုံး)
မိုးဆမ်း ဒီနေ့ ဆယ့်ရှစ်နှစ် ပြည့် သည် ..။ ဆယ့်ရှစ်နှစ်အရွယ် အပျိုမ တယောက် ရဲ့ အလှအပ တွေ က နုဖတ်ပြီး တင်းကော့နေ တော့ မိုးဆမ်း ကို သဘောကျသူ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖိုသတ္တ၀ါတွေ က ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေကြ သည် ။ မိုးဆမ်း ကို ယောင်္ကျားတွေ သဘောကျတာ အခု ဆယ့်ရှစ်နှစ်ရောက်မှ မဟုတ်ပါ ဘူး . .။ မိုးဆမ်း ဆယ့်ငါးနှစ် . .ဆယ့်ခြောက်နှစ် လောက် ကထဲ က မိုးဆမ်း ရဲ့ ဖူးရွနေတဲ့ အလှတွေကို စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ ယောင်္ကျားတွေ တပုံကြီး ရှိနေ သည် ။
မိုးဆမ်း ဆယ့်ခြောက်နှစ် တုံးက တရက်မှာ မိုးဆမ်း ကို အမေ က ဟင်းချက်နေရင်း မဆလာ လိုနေလို့ ဈေး ကို လွှတ် သည် . .။ မိုးဆမ်း ဈေး ကို ထွက်ခဲ့ သည် . .။ မိုးဆမ်း သည် ထမိန် ကို ခပ်တိုတို ၀တ်တတ် သည် . .။ မိုးဆမ်းရဲ့ ဖင်လုံးလုံးလေးတွေ တုံခါသွားတာကို လူတွေ တပ်မက်မောကြသလို . .ထမိန် တိုတို ၀တ်ထားလို့ မြင်နေရသော မိုးဆမ်း ရဲ့ ခြေသလုံး ၀င်းဝင်းလေးတွေ က ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေ သည် . .။ အိမ် နဲ့ ဈေး ကြားမှာ မိုးဆမ်း ကို ကောင်လေးတွေ စာလိုက်ပေးကြ တာ ..စကားလိုက်ပြောကြတာ ကောင်လေးတွေ အချင်းချင်း ရန်ဖြစ်ကြ ထိုးကြ ရိုက်ကြ လို့ . .မိုးဆမ်း ကြောင့် ဖြစ်ရ တယ်ဆိုပြီး နံမည်ကြီး သွားခဲ့ သည် . .။ ( မိုးဆမ်း ရေ . .ရေချိုးဟေ့ . .အန်တီသန်းတို့ အိမ် ကို သွားကြမယ် . . .) မိုးဆမ်း အမေ က အော်ပြောလိုက် လို့ ရေချိုးဖို့ လုပ်ရ သည် ..။ မိုးဆမ်း အန်တီသန်းတို့ အိမ် ကို မလိုက်ချင်ဘူး . .။ မလိုက်ဘူးဆိုရင်လဲ မိုးဆမ်း အမေ က စိတ်ဆိုးအုံးမည် . ။ အမေ့ကို အဖေါ်လိုက်ပေးရ တာပါ . ။ မိုးဆမ်း ရေချိုးခန်းထဲ ၀င် သည် . ။ ၀တ်ထားတဲ့ ဘလောက်စ် အင်္ကျီလေး ကို ချွတ် သည် . ။ အိမ်နေရင်းမို့ မိုးဆမ်း ဘရာ ၀တ်မထား . .။ ရေချိုးခန်းထဲက ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ကြီးထဲမှာ မိုးဆမ်း ရဲ့ တင်းမာ ဖွံ့ ဖြိုးတဲ့ နို့နှစ်ခိုင် က ဖြူဝင်းပြီး အချိုးကျသည် . .။လုံးဝန်း သည့် နို့တွေ ဟာ အဖျားနား မှာ ပေါ်ကို ခပ်မော့မော့လေး ကော့နေကြ သည် . .။ နို့သီးလေးတွေ က ဖြူဖွေးတဲ့ မိုးဆမ်း ရဲ့ အသားကြောင့် ပန်းနုရောင် မရင့်တရင့် လေးတွေ . .။ မိုးဆမ်း ထမိန်လေး ကိုပါ ချွတ်လိုက် သည် . .။ လေ့ကျင့်ခဏ်း အမြဲ လုပ်လို့ ချပ်နေတဲ့ မိုးဆမ်း ရဲ့ ၀မ်းပျဉ်သား ရှပ်ရှပ် . .သေးကျဉ်တဲ့ ခါးလေး . .အနောက် ကို ကောက်ထွက်နေတဲ့ ဖင်တုံးတွေ . .ရှည်သွယ်ပြီး အချိုးကျတဲ့ ပေါင်တန်တွေ . .အမွှေးနုနတွေ စုစုလေး ပေါက်နေတဲ့ ဆီးခုံ ဖေါင်းဖေါင်းမို့မို့ ..အဲဒီအောက် က နီညိုညို အကွဲလေး . .။ မိုးဆမ်း ရဲ့ အထီးဆိုလို့ ယင်ဖိုတောင် အနားဘူး . .မသန်းဘူးသေးတဲ့ ရတနာရွှေကြုတ် လေး . .။ မိုးဆမ်း တကိုယ်လုံး . . ဖြူဖွေးနုဖတ်နေပြီး အမာရွတ် . .အနာအဆာရယ်လို့ တခုမှ မရှိ . .။ မိုးဆမ်း မျက်လုံးရွဲကြီးတွေ က ညှို့အား အပြည့်နဲ့ . .လို့ လူတွေ က ပြောကြ သည် . .။ မိုးဆမ်း နှုတ်ခမ်းတွေ က နှင်းဆီ ဖူးငုံလေးလို နုပြီး ဖေါင်းကြွနေကြ သည် . .။ ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ကြီးထဲ မိမိ ကိုယ်ကို ပြန်ကြည့်မိ ပြီး လုံးတင်းတဲ့ ဖင်တုံးတွေ ကို စမ်းလိုက်မိ သည် . .။ ဒီ ဖင်တွေ ကြောင့် မိုးဆမ်း အပြင်ထွက်ရင် . .ယောက်ျားတွေ ရဲ့ မျက်လုံးတွေ ဟာ ဒီ ဖင်တွေ မှာ စိုက်ညိပြီး ပါလာသလို ခံစားရ သည် . .။ သည် ဖင်တွေ ကို တခါတခါတော့ စိတ်ပျက်မိပေမဲ့ တခါတခါတော့ ဒါတွေ ပိုင်ဆိုင်ရတာကို ကျေနပ်မိသလိုဘဲ . .။ စိတ်ပျက်တယ် ဆိုတာ က ဒီ ဖင်တွေ ကို အရွယ်တူ ကောင်လေးတွေ သာမက ဦးလေး အရွယ် . .ဘဘကြီး အရွယ် တွေ ကပါ ..သဘောကျကြ သည် . .။ တပ်မက်ကြ သည် . .။ ခေါ်တော တထောင်အား မျက်လုံးတွေ နဲ့ ငမ်းကြ လို့ ပါ . .။ မိုးဆမ်း ဖင်စိုင်တွေ ကလဲ မိုးဆမ်း လမ်း လျောက်ရင် ..ဗရမ်းဗတာ တုံခါတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ .ကျောက်ကျောဆိုင်မှာ ရောင်းတဲ့ လူ က ထည့်ထားတဲ့ ကြွေရေသုတ် ဇလုံကြီး ကို ခွက် နဲ့ ခေါက်တာကြောင့် ကျောက်ကျော အမဲတုံးကြီး .တုံခါသွားတဲ့ တုံခါမှုမျိုး . .။ ဒီ ဖင်တွေ ဟာ သိပ် လှကြောင်း . .မကြားတကြား ပြောကြတာတွေ လဲ ကြားဘူးခဲ့ ရ သည် . .။ မိန်းကလေး အချင်းချင်း ကလဲ မိုးဆမ်း ဖင်တွေ သိပ် တောင့်တယ် . .လှတယ်လို့ ချီးကျူးတာ ကြုံရ သည် . .။ မိုးဆမ်း ဆီးခုံဖေါင်းဖေါင်းကြီး က အမွှေးနုနုလေးတွေ က တခါမှ မရိတ်မညှပ်ရသေး . .။ ခပ်ကြဲကြဲ ခပ်ပါးပါး . .နုနုလေးတွေ ဖြစ် သည် . .။ မိုးဆမ်း သူမ ကိုယ်ကို မှန်ကြီးထဲ ကြည့်၇င်း . ဒီလို အ၀တ်မပါဘဲသာ ယောက်ျားတွေ သူမ ကို တွေ့လိုက်ရင် ဘယ်လို ဖြစ်ကုန်ကြမလဲ မသိဘူး ဆိုပြီးတွေးမိရင်း . .ပြုံးမိလိုက် သည် ။ မိမိ ရဲ့ ပေါင်ကြားဂွဆုံ က ရတနာရွှေကြုတ် ကို မသိမသာ စမ်းမိ လိုက် သည် . .။မိုးဆမ်း ဒီနေရာ ကို လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ် လောက်ကထဲ က တခါတခါ ကိုင်မိရတဲ့ အကျင့် ရ ခဲ့ ရ သည် . .။ ညဘက် အိပ်နေရင်း အိပ်မက်တွေ မက် ရင် ဒီနေရာ က တင်းတင်းကြီး အထဲက ယားသလိုလို ဖြစ်တတ်ပြီး လက်နဲ့ ပွတ်မိ တတ် သည် . .။ပွတ်မိတော့ လဲ အဲလို ပွတ်တာ ကောင်းသလိုလို ခံစားရလို့ ထပ်ခါထပ်ခါ ပွတ်ချင်မိပြန်ရော . .။ အရေတွေလဲ တအား ထွက်တာဘဲ . .။ မိုးဆမ်း အပျိုဖေါ်ဝင်ခါစ ကထဲ က မိုးဆမ်း အမေ က မိုးဆမ်း ကို လိင်ကိစ္စ သိသင့်တာတွေ သင်ပေးခဲ့ သည် . .။ မိန်းမ အင်္ဂါဇတ် ကို . .စောက်ပတ် . .စောက်ဖုတ် . .ရှေ့ဖင် . .ပိပိလေး . .ပူစီ . .အဖုတ် . .လို့ အမျိုးမျိုး ခေါ်ကြကြောင်း . .ယောင်္ကျားအင်္ဂါဇတ် ကို လီး . ..ငပဲ . .ဒစ် ..လို့ ခေါ်ကြကြောင်း ..ပြောပြ သည် . .။ ယောင်္ကျားတွေ အင်္ဂါဇတ် နဲ့ မိန်းမတွေ အင်္ဂါဇတ် မတူညီတာတွေ . .သဘာဝအရ ဒီ အင်္ဂါဇတ် နှစ်ခု တခုထဲကို တခု သွတ်သွင်းတာ ကို ကာမ စပ်ရှက်တယ် ( လိုးတယ် ) လို့ ခေါ်ကြောင်း ..ယောင်္ကျားတွေ ရဲ့ တဏှာစိတ်အကြောင်း . .အပျိုစင် ဘ၀ ကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမဲ့ အကြောင်းတွေ ပြောပြ သင်ပေးခဲ့ ပေ သည် . .။ဒီ အပျိုဖေါ်ဝင်စ ကထဲ က ဘတ်စ်ကားကျပ်ကျပ် စီးရရင် လက်သရမ်းတဲ့ ယောင်္ကျားတချို့ ကို မိုးဆမ်း စပြီး တွေ့ဘူးရ သည် . .။ အဖေအရွယ် . .ဘကြီးအရွယ်ကြီးတွေကလဲ . မိုးဆမ်းတို့ မိန်းမတွေ ကို အနောက် ကနေ ဖင်တွေကို လိုက်ထိကပ် ထောက်တတ်ကြတာလဲ မိုးဆမ်း သိရှိခဲ့. .တွေ့မြင်ခဲ့ . .ကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့ ရ လေ သည် . .။ အဲဒီ အချိန်ထဲ က လဲ မိုးဆမ်း သည် ကျောင်းက အတန်းဖေါ် သူငယ်ချင်း မိန်းကလေးတွေ ပြောပြလို့ ယောင်္ကျားနဲ့ မိန်းမ လိင် ဆက်ဆံရေး အကြောင်းတွေ ကို ပိုပြီး ကြားဖူးခဲ့ ရ ပြီး တချို့သော ထရွ သည့် သူငယ်ချင်းတွေ ရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် မိုးဆမ်း သည် အော စာအုပ် ( ခေါ် ) အပြာစာအုပ်များ ကို ခိုးပြီး ဖတ်ဘူးခဲ့ ရ လေ သည် . .။ အပြာစာအုပ်များထဲ က တစ်တစ်ခွခွ . .ပွင့်လင်းစွာ ရေးသားထားတဲ့ ဖိ မ ဆက်ဆံရေး အကြောင်းများ ကို မိုးဆမ်း ဖတ်မိရသော အခါ စိတ်တွေ လှုပ်ရှား . .ထကြွ ခဲ့ရ ပေ သည် . .။ သူမ သတိထားမိရတာမှာ သူမ ရဲ့ ပေါင်ကြားဗဟို က ပိပိလေး ( သို့ ) စောက်ဖုတ် သည် အရေတွေ စိုရွှဲ လာတာ ဖြစ် လေ သည် . .။ ဒီ ကာမ စပ်ရှက် တဲ့ အကြောင်းတွေ ကို မိုးဆမ်း ဖတ်ရင်း . .တင်းမာလာတဲ့ ပေါင်ကြား က ပိပိလေး ( သို့ ) စောက်ပတ် ကို လက်နဲ့ ဖိကာဖိကာ ပွတ်သပ်မိတဲ့ အကျင့်လဲ ရလာပေ သည် . .။ သည်စာအုပ်တွေ ဖတ်ရင် သူမ ရဲ့ ပိပိလေး ( သို့ ) စောက်ဖုတ် က အရေတွေ တအား စိုစိုရွှဲလာရတာကိုလဲ မိုးဆမ်း ကြုံတွေ့ရလေ သည် . .။ မိုးဆမ်း သည် သူမ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ ..သုန်ငယ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး . .စောအောင် နဲ့ ခင်မင်ခဲ့ရ သည် . .။ စောအောင် သည် အစိုးရ ဘက် က အရာရှိကြီးကြီး တယောက် ရဲ့ သား ဖြစ် သည် . .။ အစိုးရ လူကြီးတွေ စီးတယ်ဆိုတဲ့ အရောင်တောက်တောက် နဲ့ ကားအသစ် လေးကို စီးတာ မိုးဆမ်း တွေ့ သည် . .။ သုန်ငယ် ရဲ့ အိမ် မှာ မွေးနေ့ပွဲလုပ်ရင်း စောအောင် နဲ့ မိုးဆမ်း စပြီး ခင်မင်ခွင့် ရ ခဲ့ သည် . .။ စောအောင် သည် ခောတ်စားနေသော တိုင်တဲနစ် ရုပ်ရှင်ကားထဲ က ( လီယိုနာဒို ဒီကာပရီရို ) ဆိုတဲ့ ဇာတ်လိုက် နဲ့ ရုပ် တူ သည် . .။ စောအောင် သည် လူချောလေး တယောက် ဖြစ်ြပီး မိန်းကလေးတွေ . .မျက်စိကျတဲ့ ကောင်လေး လဲ ဖြစ်လေ သည် . .။ စောအောင် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိုးဆမ်း ရင်ခုန်ခဲ့ရ သည် . .။ စောအောင် က သူ မိုးဆမ်း ကို စွဲလန်းနေကြောင်း . .ချစ်ကြောင်း . .သုန်ငယ် ကို ပြော သည် . .။ သုန်ငယ် က မိုးဆမ်း ကို ပြန်ပြောပြ သည် . .။ စောအောင် သည် လူကောင်း ဖြစ်ကြောင်း . .မိန်းကလေးတွေ ကပင်သူ့ ကို လိုက်ချောင်းနေကြရ တဲ့ လူချောလေး မို့ မိုးဆမ်း အနေနဲ့ ပြန် ကြိုက်သင့်ကြောင်း . .သုန်ငယ် က မိုးဆမ်း ကို တိုက်တွန်းလေ သည် . .။ မိုးဆမ်း က သုန်ငယ့်ကို . .( သုန်သုန် . .ယူ က ရေရေလည်လည် ညွှန်းစာ ဖွဲ့နေပါလား . .ယူ ဘဲ ကြိုက်လိုက်ပါလား ကွာ . .) လို့ ပြော သည် . .။ သုန်ငယ် က . .( ဟ . .မိုးဆမ်း . .သူ က ငါ့ကို ကြိုက်မှ မကြိုက်တာ . .သူ က ငါ့ကို ကြိုက်လို့ကတော့ . .ဟင်း . .ခုလောက် ဆို ကလေး ထွက်နေပြီ . .ဟီးဟီး . .) လို့ ပြောလေ သည် . .။ ( ဟယ် ကောင် စုတ် . .မိုက်ရိုင်းတယ် . .) ( အေး . .အမှန်တရား ကို ပြောတာ . .မိုးဆမ်း . .ငါ က နင့်လို ဖင်လဲ မကြီး . .နို့လဲ မလှဘူးလေ . .ဟွန်း . .စောအောင် က ဒါ တွေ သွားရေယိုနေတာ ဖြစ်မှာ ပေါ့ . . .) မိုးဆမ်း က သုန်ငယ့် ကို ခွေးစုတ်မ လို့ ဆဲလေ သည်. .။သုန်ငယ် က တဟားဟား အော်ပြီး ရယ်မော သည် . .။ သုန်ငယ် က ကြား က အောင်သွယ် လုပ်ပါတော့ သည် . .။ ပျော်ပွဲစား ( ပစ်ကနစ် ) ပွဲတခု ကို ဖန်တီး သည် . .။ သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီး ကို စုပြီး ကန်တော်ကြီး စောင်း မှာ လုပ် တဲ့ ပျော်ပွဲစား က မိုးဆမ်း နဲ့ စောအောင် အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး . .သုန်ငယ် က ကမကထ လုပ်တာ ဖြစ် သည် . .။ သုန်ငယ် ဖြစ်စေချင်သလိုဘဲ မိုးဆမ်း နဲ့ စောအောင် ရင်းနှီးသွားကြ သည် . .။ စောအောင် နဲ့ မိုးဆမ်း . .ရုပ်ရှင် အတူ သွားကြည့် ဖြစ် သည် . ။ ပန်းခြံတွေ သွားဖြစ် သည် . .။ အစားအစာ အတူ စားဖြစ် သည် . .။ မကြာခင် မိုးဆမ်း နဲ့ စောအောင် ချစ်သူ ဖြစ်သွားကြ သည် . .။မိုးဆမ်းရဲ့ မိဘတွေ က သတင်းကြားလို့ တားကြ သည် . .။ ကျောင်းနေဆဲ အချိန် မို့ . .အချိန် မတန်ခင် လမ်းလွဲချော်သွား မှာ စိုးရိမ်ကြ သည် . .။ သို့ပေမဲ့ စောအောင် နဲ့ မိုးဆမ်းတို့ ကတော့ လူငယ်သဘာဝ . ဆက်ပြီး ချိန်းမြဲ . .သွားမြဲ . .ပါဘဲ . .။ တနေ့တော့ သူတို့ လျောက်လည်ရင်း ခရီးလွန်သွားကြ သည် . .။ အိမ်ပြန်ဖို့ အချိန် ကျော်သွားသည် .. ။ မိုးဆမ်း အိမ် မပြန်ရဲတော့ . .။ မိဘတွေ နဲ့ ရင်မဆိုင်ရဲ . .။ ဒီ အကြောင်းပြချက် နဲ့ ဘဲ စောအောင် က မိုးဆမ်း ကို ခိုးပြေး သည် . ..။ စောအောင် သည် သူ့ အမေဘက် က ဆွေနီးမျိုး စပ် တော် သည့် ဦးလေး ၀မ်းကွဲ တယောက်ဆီ ကို ခိုးပြေးလိုက် သည် . .။ အဲဒီ ဦးလေး သည် အသက် ၄၀ကျော် လူပျိုကြီး တယောက် ဖြစ် သည် . .။ ဦးလေးကို ကြို မပြောထားဘဲ . .ရုတ်တရက်ကြီး သွားကြတာ ဖြစ်ပေမဲ့ စောအောင် နဲ့ မိုးဆမ်း ဦးလေး အိမ်ကို ရောက်သွားတော့ . .ဦးလေး နဲ့ တွေ့ သည် . .။ ဦးလေး က အံ့ အားသင့်နေ သည် . .။ ( ဟေး . .စောအောင် . .လာကြကွာ . .လာလည်ကြတာ လား . .အချိန်မရွေး လာကြ . .ဦးလေး က တယောက်ထဲ နေတာ . .) ( ဟုတ်တယ် . .ဦးလေးရေ . .အရေးတကြီးေ၇ာက်လာကြတာ . .မိန်းမ ခိုးလာတယ်ဘဲ ဆိုပါတော့ . .) ( ဟေ ....) ( ဟုတ်တယ် . .ဦးလေး . .ကျနော့်မှာကလဲ အားကိုးစရာ ဆိုလို့ ဦးလေး ဘဲ ရှိတယ် မဟုတ်လား . .) ဦးလေး က သဘောကျ သည် . .။ တဟားဟား ရယ် သည် . .။ ဦးလေး သည် ဧည့်ခန်း ဆိုဖါ မှာ အပေါ်ပိုင်းဗလာ နဲ့ အစိမ်းပုတ်ရောင် ဘောင်းဘီ အတိုလေး နဲ့ ထိုင်နေတာ ဖြစ် သည် . .။ မိုးဆမ်း လဲ အကဲခတ်ကြည့်တော့ . .ဦးလေး သည် အသက် ၄၀ကျော်ပေမဲ့ ချပ်ချပ် ရပ်ရပ် ရှိသော ကိုယ်လုံး နဲ့ သူ့ အရွယ်ထက် ပိုပြီး နုပျို သည် လို့ ထင် မိ သည် . .။ ဦးလေး ရဲ့ အကြည့်တွေ ကလဲ ရဲတင်း သည် လို့ မိုးဆမ်း ထင် သည် . .။ မိုးဆမ်း ကို ကြည့်တာ မိုးဆမ်းရဲ့ အ၀တ်တွေ ကို ဖေါက် ထွင်း မြင်သလိုမျိုး ကြည့်တာ . .သူ့ အကြည့်တွေ က တဏှာ စိတ် နဲ့ ကြည့်သလို . .ပြစ်မှားနေသလို ကြီး လို့ ထင်မိ သည် . .။သူ က တယောက်ထဲ နေတာ လို့ ပြောပေမဲ့ အိမ် အတွင်းဘက် က မိုးဆမ်း အသက်နဲ့ မတိမ်းမယိမ်း အရွယ် ဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေးတယောက် ထွက်လာ သည် . .။
ကောင်မလေး က ထမိန် ရင်လျား နဲ့ ထွက်လာ တာ . .။ စောအောင် နဲ့ မိုးဆမ်း ကို တွေ့လိုက်တော့ . .( အို . .) ဆိုပြီး အနားမှာ လှမ်းထားတာ တွေ့တဲ့ ဦးလေး ရဲ့ တီရှပ်တထည် ကို ဆွဲယူပြီး သူမ ရင်မှာ ဖုံးလိုက် သည် .. ။
ဦးလေး က .( ဟဲ . .ဟဲ . .ဒါ က ဦးလေး . .ရဲ့ ဟို ဒင်း .ဘော်ဒါပေါ့ . ..လဲ့လဲ့တင် . .တဲ့ . .ဦးလေး ဆီ ခဏ လာလည်တာ ပေါ့ . .လဲ့လဲ့ေ၇ ..ဒါ လေးလေး ရဲ့ တူ နဲ့ သူ့ မိန်းကလေး . .). .လို့ မိတ်ဆက်ပေး သည် . .။ ဦးလေး က စောအောင် နဲ့ မိုးဆမ်း ကို သူ့ အိပ်ခန်းဘေး က ကပ်ရက် အိပ်ခန်းမှာ နေရာ ချထားပေး သည် . .။ ( မင်းတို့ ဘာမှ အားမနာ နဲ့ . .လိုတာ ပြော . .ဦးလေး ကူညီမယ် . .) ညစာ ကို ဦးလေးတို့ ရပ်ကွက် က တရုတ်ဆိုင် ကနေ မှာစားကြ သည် . .။ ဦးလေး နဲ့ လဲ့လဲ့တင် . .စောအောင် နဲ့ မိုးဆမ်း . .နှစ်စုံတွဲ တီဗွီ ထိုင်ကြည့်ကြ သည် . .။ လဲ့လဲ့တင် သည် ဦးလေး ကို ဖက်ထားရင်း . .( ဦး . .လဲ့ လူကြီးကား ကြည့်ချင်တယ် . .) လို့ ညုတုတု နဲ့ြေ့ပာလိုက် သည် . .။ စောအောင် နဲ့ မိုးဆမ်း တို့ သည် လဲ့လဲ့တင် ဘာ ကို ဆိုလိုတယ် ဆိုတာ သဘော ပေါက်လိုက် သည် . .။ လဲ့လဲ့ တင် သည် အပြာ ရုပ်ရှင် ကြည့်ချင်ကြောင်း ပြောနေတာ ဖြစ် သည် ..။ မိုးဆမ်း အနေ နဲ့ အပြာရုပ်ရှင် ကို ခေတ် လူငယ် တယောက် မို့ သုန်ငယ် တို့နဲ့ အတူ ကြည့်ဘူး သည် . .။ ဒါပေမဲ့ စောအောင် ရဲ့ ဦးလေး နဲ့ အတူကြည့်ရမှာတော့ ၀န်လေးသလို ဘဲ . .။ ဒါပေမဲ့ ဒါ က ဦးလေး ရဲ့ အိမ် မို့ . .သူ့ ကို အားကိုးပြီး လာကြတာမု့ ဘာမှ မပြောရဲ . ..။ ဦးလေး က ( စောအောင် နဲ့ မိုးဆမ်း ရေ ဖြစ်တယ် မှုတ်လား . .လဲ့ လဲ့ က ဘလူးပစ်ချာ ကြည့်မလို့ တဲ့ . .အင်းလေ . .ဒီည က မင်းတို့ စုံတွဲအတွက် . ..မင်္ဂလာဦးည ဘဲ လေ . .မင်းတို့ ၂ယောက် လဲ ကြည့်သင့်ပါတယ် . .) လို့ သူတို့ ကို ပြောပြီး တဟားဟား ရယ်လေ သည် . .။ မိုးဆမ်း ကတော့ ရှက်လို့ ခေါင်းလေး ငုံ့ ထားသည် . .။ လဲ့လဲ့တင် က စက်ထဲ ကို ဒီဗွီဒီ အပြား ထည့်လိုက် သည် . .။ မိုးဆမ်း သည် စောအောင် ကို သူမ အိပ်ခန်းထဲ ၀င်တော့မည် လို့ တီးတိုး ကပ်ပြော သည် . .။ စောအောင် က ( ဦးလေး စိတ်ဆိုးလိမ့် မယ် . .သူ့ အိမ် မှာ ဘယ်လောက် ကြာကြာ ကပ်နေရ အုံးမလဲ မသိဘူး . .) လို့ တီးတိုး ပြန်ပြော သည် . .။ ဒါကြောင့် မိုးဆမ်း သည် ခေါင်းလေး ငုံ့ကာ ထိုင်နေရ သည် .. ။ အပြာရုပ်ရှင် ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ပုလွေ .ဘာဂျာ မှုတ်တာတွေ နဲ့ စပြီ ..။ လီးတန်ကြီး ကို လျာနဲ့ ယက်လိုက် စုတ်လိုက် လုပ်နေ သည် . .။ လဲ့လဲ့တင် သည် တခစ်ခစ် နဲ့ သဘောကျ ကာ ဦးလေး ကို တအားဖက်ထား သည် . .။ စောအောင် သည်လဲ အပြာဇာတ် ကို ကြည့်ရင်း . .စိတ်တွေ ကြွ လာပုံရ သည် . .။ မိုးဆမ်း ကို ဖက်ပြီး မိုးဆမ်း ပေါင်တွေ ကို ပွတ် လာ သည် . .။ ဦးလေး က . .( မင်းတို့ အိပ်ခန်းထဲ ၀င်ချင်ရင် အားမနာ နဲ့ နော . .လွတ်လွတ်လပ်လပ် သာ ပျော် ကြ . ..ဟဲဟဲ . .. ) လို့ ပြောသည် . .။ မိုးဆမ်း မသိမသာ ဦးလေးဘက် ကို ကြည့်လိုက်တော့ ဦးလေး ပေါင်ကြား က အတန်ကြီး ပုဆိုးကြား က မတ်မတ် တောင်နေတာ တွေ့လိုက် ရလေ သည် . .။ စောအောင် ကို ကြည့်လိုက်တော့ လဲ . .စောအောင် ပုဆိုးကြားက အတန်ကြီး က မတ်မတ် တောင်နေ သည် . .။အော် . .ယောင်္ကျားတွေ များ . .မြန်လိုက်ကြတာ . .။ ဒါပေမဲ့ မိုးဆမ်း သည် သူမ ပေါင်ကြား က စိုစိစိုစိ လိုဘဲ ခံစားလိုက်ရတာကြောင့် မသိမသာ လက်နဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်ရာ မိမိ သည်လဲ အရေတွေ စိုစို ရွှဲနေတာ တွေ့ ရလေ သည် . .။ အပြာ ဇာတ်ကားကတော့ ပိုပို ကြမ်းလာ သည် . .။ စောအောင် က . .( ဦးလေး . .ကျနော်တို့တော့ အိပ်တော့မယ် ဗျာ . .) လို့ ဦးလေး ကို နုတ်ဆက်ပြီး မိုးဆမ်း ရဲ့ လက် ကို ဆွဲကာ အိပ်ခန်းထဲ ကို ၀င်လေ သည် . .။ လဲ့လဲ့တင် က သဘောကျစွာ ပြုံး သည် .. ။ ဦးလေး ကတော့ . .မိုးဆမ်း သည် စောအောင် ခေါ်ရာ ကို ပါသွားချိန် မိုးဆမ်း ထမိန် အနောက်ဖက် ဖင်တုံးတွေ အောက်ဖက် မှာ အရေတွေ ကွက်စိုနေတာ ကို တွေ့ဖြစ်အောင် တွေ့လိုက် ပြီး ခေါင်းတညှိမ့်ညှိမ့် နဲ့ ပြုံးပြုံး ကြီး လုပ်နေ သည် ..။ လဲ့လဲ့တင် သည် စောအောင် နဲ့ မိုးဆမ်းတို့ အိပ်ခန်းထဲ ၀င်သွားတာ နဲ့ တပြိုင်နက် . .ဦးလေးရဲ့ ပုဆိုး ကို ဖြေချ ကာ ဦးလေးရဲ့ ညိုမောင်းသော လီးတန်ရှည်ကြီး ကို လက်ဖြင့် ဆုတ်ကိုင် လေ သည် . .။ စောအောင် သည် အိပ်ခန်းထဲ ရောက်တာနဲ့ မိုးဆမ်း ကို အငမ်းမရ နမ်းလေ သည် . .။ နမ်းစုတ် သည် လို့ ပြောပါက ပိုလို့ မှန်မည် . .။ မိုးဆမ်း ရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေး ကို စုတ် သည် . .။ စောအောင်ေ၇ာ.. မိုးဆမ်း ပါ အပြာ ရုပ်ရှင်ကြောင့် စိတ်တွေ ထကြွ နေကြ သည် . .။ စောအောင် က သူ့ အ၀တ်တွေ ကို အမြန်ဆုံး ချွတ် ပစ် သည် . .။ ( မိုးဆမ်း . .အ၀တ်တွေ ချွတ် . .) ခပ် တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်ပေမဲ့ စောအောင် ရဲ့ အသံ က အမိန့်သံ ဆန် သည် . .။ မိုးဆမ်း သည် စောအောင် ရဲ့ စကား ကို စိတ်ညှို့ ခံထားရတဲ့ လူလို တသွေမတိမ်း နားထောင် သည် . .။ သူမ အ၀တ်တွေ အားလုံး ကို ချွတ်ပစ်နေပါ သည် . .။ သူတို့ နှစ်ယောက်စလုံး . .၀တ်လစ်စလစ် . .မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း ဖြစ်ကုန် ပြီ.. ။စောအောင် ရဲ့ လီးကြီး ကို မိုးဆမ်း အခုမှ စ မြင်ဘူးတာ ဖြစ် သည် . .။ အို . .နဲနဲနောနော ဟာကြီး မဟုတ်ဘူး . .စောအောင် ဟာ တကယ် လီးကြီးတဲ့ ကောင်ပါ လား . .။လီးကြီး က မတ်မတ်တောင်နေ သည် . .။ လီးထိပ် က ဒစ်ပြဲကြီး က ရင်တုန်စရာကြီး . .။ဒါကြီးနဲ့ သူမ ကို လိုးမှာပါလား..ဆိုတာ တွေးမိတော့ မိုးဆမ်း . .တော်တော် လန့်နေ သည် ..။ ချစ်သူ ရဲ့ လိုးတာ ကို ခံရမည် ဆိုတဲ့ အသိကလဲ ရှိနေသည် . .။ စောက်ပတ်ထဲက လဲ ယား သည် . .။ အရေတွေကလဲ စိုစို ရွှဲနေ သည် . .။ ( မိုးဆမ်း . .လာ . ..လီး လာ စုတ် . .) စောအောင် က ခေါ်လိုက်သည် . .။ မိုးဆမ်း သူ့ ရှေ့ ဒူးလေးထောက်ခါ ထိုင်ချလိုက် သည် . .။ ( မိုး . .မိုး . .ဆမ်း . .တခါမှ မစုတ်ဘူး ဘူး . ကိုကို . ..) ( စ စုတ် မှ စုတ် တတ်သွားမှာ ပေါ့ . .ကိုကို သင်ပေးမယ် . . .) မိုးဆမ်း . .အပြာ ပုံတွေ မှာ လီးစုတ်တာတွေ တွေ့ဘူး သလို အပြာ ရုပ်ရှင်တွေမှာလဲ လီးစုတ်တာ တွေ့ဘူး ခဲ့ သည် . .။ တခါမှတော့ မစုတ်ဘူးသေးဘူး . .။ မိုးဆမ်း သည် အပျိုစင် စစ်စစ်လေး ပါ . .။ ယောင်္ကျားတွေ ပြောပြောနေတဲ့ ပါကင် . .ပေါ့ . .။
အခု အဲဒီ ပါကင် ကို စောအောင် က ဖွင့်တော့ မည် . .။ အသစ်စက်စက် စောက်ပတ်လေး သည် လီးကြီးကြီးတချောင်း နဲ့ လိုးထည့်တာ ကို ခံရတော့မဲ့ အချိန် ပါ . .။မိုးဆမ်း တကိုယ်လုံး ကြောက်လို့ တုန်ရီနေ သည် ..။ စောအောင် ရဲ့ လီးကြီး က မြွေဟောက်ကြီးတကောင်ပါးပျဉ်းထောင်သလို မတ်မတ်ကြီး တောင်နေ သည် . .။ ( ငုံလိုက် မိုးဆမ်း . . .) စောအောင် ပြောတဲ့ အတိုင်း . .မိုးဆမ်း . .လီး ကြီး ရဲ့ ထိပ်ပိုင်း ဒစ်ကောက်ကောက်ကြီး ကို ပါးစပ်နဲ့ ငုံလိုက်ပါ သည် . .။ ငံကျိကျိ အရသာ ရပေမဲ့ စောအောင် စိတ်ဆိုးမှာစိုးလို့ အောင့်အီးပြီး စုတ်ပေးလိုက် သည် . .။စောအောင် သည် ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်နေတဲ့ မိုးဆမ်း ကို လီးစုတ်ခိုင်းနေတာ ကို တဖက်ခန်း မှ စောအောင် ရဲ့ ဦးလေး နဲ့ သူခေါ် လိုးသော အပျက်မလေး . .လဲ့လဲ့တင် တို့ ချောင်းကြည့်နေကြ သည် . .။စောအောင် သည် မိုးဆမ်း ကို လီး စုတ်နည်း သင်ပေးနေ သည် .. ။ မိုးဆမ်း သည် စောအောင် ခိုင်းစေတဲ့ အတိုင်း . .သင်ပြတဲ့ အတိုင်း . .လီးကို စုတ်ပေး သည် . .။ လီးစုတ်ရတာ ကို မိုးဆမ်း ကြိုက်သွားသလိုဘဲ . .။ ဂွေးစိတွေ ကို ဖွဖွလေး ကိုင်ဆုတ်ပေးဖို့ စောအောင် က ပြောသည် . .။ စုတ်နေချိန်မှာ စောအောင် က မိုးဆမ်း နို့တွေ ကို ကိုင်တွယ် သည် . .။ ဆုတ်နယ် . .ဆော့ကစား သည် . .။ နို့သီးလေးတွေ ကို ချေနယ် သည် . .။ အားရအောင် စုတ်ခိုင်းပြီး မှ . .( ကဲ မိုးဆမ်း . .ဖင်ထောင်ပြီး ကုန်းလိုက် . .) လို့ စောအောင် လုပ်ခိုင်းတော့ မိုးဆမ်းလဲ သူ ခိုင်းတဲ့ အတိုင်း လေးဘက်ထောက်ပေးလိုက် သည် . .။ ( ဖင်တွေကို ထောင်လိုက် မိုးဆမ်း . .) စောအောင် သည် မိုးဆမ်း ဖင်တွေ ကြား က ပြူးထွက်နေသော မိုးဆမ်း ရဲ့ ရတနာ ရွှေကြုတ် ဖေါင်းဖေါင်းကြီး ကို ယက်ပါတော့ သည် . .။ မိုးဆမ်း ရဲ့ ဖင်တွေ ကို ဆုတ်ကိုင်ကာ ဖြဲ သည် . .။ ( အို . .ကိုကို . .) စောအောင် သည် မိုးဆမ်း ဖင်ပေါက် ထဲကို လျာကြီး ထိုးသွင်းကာ လျာကြီး ကို မွှေတော့ မိုးဆမ်း . .ဖင်တွေ ရမ်းခါနေရပြီ . .။ကိုကို့ . အဲဒါ ဖင်ပေါက် . .လို့ ..မိုးဆမ်း အော် သည် . .။ ကိုကို့ ကို အားနာ လို့ပါ . . သိတယ် မိုးဆမ်း . .တနေ့ကျရင် ကိုကို အဲဒီ ဖင်ပေါက် ကို လိုးမှာ . .မိုးဆမ်း . .ဖင်ခံရမယ် . .သိလား . . မိုးဆမ်း သည် စောအောင် ဘယ်လို ဖြစ်သွားပါလိမ့် လို့ အံ့ သြနေ သည် . .။သူ့ ကို မရခင် မှာ အင်မတန်မှ သိမ်မွေ့တဲ့ စကားလုံးတွေ နဲ့ ပြောဆို သည် . .။ အခု ခိုးလဲ ပြေးရော . .အင်မတန်မှ ပက်စက် တဲ့ ရိုင်းတဲ့ ညစ်ပတ်တဲ့ စကားတွေ နဲ့ ပြောဆိုနေ သည် . .။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် . .မိုးဆမ်း သူ့ ကို ချစ် သည် . .။ သူ ပြောတာတွေ ကို ခိုင်းတာတွေ ကို မိုးဆမ်း လုပ်မည် . .။ အိုး . .စောအောင် သည် မိုးဆမ်း စောက်ဖုတ် ကို လျာကြီး နဲ့ ယက်ပြီ . .။အိုး . . .ဟင့်ဟင့် . . .အိ . .အိ . ..အား . .ရှီး . .ရှီး . .. အ . ..အ . . .. တဖက်ခန်း မှ ဦးလေး သည် . .စောအောင် နဲ့ မိုးဆမ်း လုပ်နေတာ ကို ချောင်းနေ သည်. . ။ဒီအချိန် မှာ လဲ့လဲ့တင် က သူ့ လီးကို စုတ်ပေးနေ သည် . .။ စောအောင် သည် မိုးဆမ်း စောက်ဖုတ် ကို လျာအပြားလိုက်ကြီးနဲ့ ယက်ပေးနေ သည် . .။ အထက်အောက် စုံချီ ဆန်ချီ ယက် သည် . .။ စောက်ပတ် ယက်တာ ကို စာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဘူး သည် . .။ အပြာ ကားထဲမှာ ကြည်ကဘူး သည် . .။ ခုတော့ လက်တွေ့ အယက်ခံနေ၇ပြီ . .။ စောအောင် သည် တော်တော် ကြာကြာ ယက်ပေးပြီးတော့ မိုးဆမ်း ကို လိုးပါတော့ သည် . .။ စောအောင် သည် မိန်းမ လိုးတာ ၀ါရင့်သူ ဆိုတာ သိသာ သည် . .။ ကြောက်နေတာ . .တုန်လှုပ်တာ မရှိ ဘူးး . .။ မိုးဆမ်း ကို သူ့ လီးတုတ်တုတ်ကြီး နဲ့ ရအောင် လိုး သည် . .။ မိုးဆမ်း က နာကျင်မှာ ကို ကြောက်ပေမဲ့ သူ ချစ်တဲ့ ကိုကို က လိုးနေတာမို့ ကျေနပ် သည် . .။ နာကျင်မှုနဲ့ အတူ ကာမ အရသာထူး ကလဲ ဒွန်တွဲနေ သည် . .။မိုးဆမ်း ရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးထဲ သပ်ရိုက်ထားသလို ထိုးသွင်းမိထားတဲ့ လီးကြီး ကို တဖက်ခန်း က ဦးလေး သည် မျက်တောင်မခပ်တမ်း မမှိတ်မသုန် ကြည့်နေသည် . .။ စောအောင် ပါကင်ဖွင့်နေတာ ကို အားရပါးရ ကြည့်နေတဲ့ ဦးလေး ဟာ . .မိုးဆမ်း ရဲ့ စောက်ဖုတ် ကို အရမ်း သဘောကျသွားလေ သည် . .။ စောက်ဖုတ်လေး သည် ဖေါင်းနေပြီး . .အင်မတန်မှ ကြည့်ကောင်းသည် လို့ သူ ထင် သည် . .။ စောအောင် လီးကြီးနဲ့ တအား အတင်းထိုးထားတာခံရတာကြောင့် စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသာလေးတွေ သာ နီနီရဲနေ သည် . .။ စိုးးအောင် သည် ကျပ်လှတဲ့ မိုးဆမ်းရဲ့ စောက်ဖုတ် အသစ်စက်စက်လေး ထဲမှာ ညပ်နေတဲ့ သူ့ လီးကြီး ကို ဖြေးဖြေးချင်း လှုပ်ရသည် . .။
လှုပ်လိုက်တိုင်း . .မိုးဆမ်းအတွက် နာကျင်လှတာမို့ မိုးဆန်း . .
အား...အား . .နဲ့ အော် သည် . .။ မိုးဆမ်း ပေါင်တန်တွေ ကို အစွမ်းကုန် ဖြဲကားလိုက်ပြီး .မိုးဆမ်း နို့တွေ ကို စို့ပေးရင်း . .ဖြေးဖြေးချင်း . .တထစ်ချင်း . .ထိုးသွင်းနေ သည် . .။ မိုးဆမ်း သည် ထိုးသွင်းလို့ မရအောင်ကို ကျပ်နေတဲ့ စောက်ဖုတ် ကို စောအောင် ရအောင် လိုးတာ ကို ခံနေရ သည် . .။စောအောင် ရဲ့ လီးရှည်၇ှည်ကြီး သည် မကြာခင်မှာဘဲ မိုးဆမ်းရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲ အ၇င်းထိ တချောင်းလုံး ၀င်ရောက်သွား သည် . .။လီးကြီး ကို အသာ ဆွဲနုတ်လိုက်တော့ လီးကြီးမှာ သွေးစသွေးနတွေ ကပ်ညိလာတာတွေကရတဲ့ စောအောင်မှာ အပျို စစ်စစ် ကို ပါကင်ဖွင့်ရတာ ဆိုပြီး အလွန်ဘဲ ကျေနပ်သွားလေ သည် . .။ စောအောင် သည် ပါကင် ဖွင့်နေကျ ဖြစ်မည် .. ။ ဦးလေး သည် တဖက်ခန်းမှ . .စောက်ပတ်ကျပ်ကျပ်ထဲ လီးကြီး အတင်းထိုးနေတာ ကို ကြည့်ရင်း ..သူ့ လီး ကို တအား စုတ်ပေးနေတဲ့ . .လဲ့လဲ့တင် ရဲ့ ပါးစပ်ထဲ ကို သုတ်ရေတွေ ပန်းထုတ်ခါ ပြီးသွားရ သည် . .။ စောအောင် သည် လဲ မိုးဆမ်း ကို တညလုံး တ၀ လိုးပစ်မည် လို့ မှန်းထားတာ မို့ သိပ် အချိန် ဆွဲ မနေတော့ဘဲ . .ပြီးလိုက် သည် . .။ မိုးဆမ်း . .သည် သုတ်တွေ ပေပွနေသော သူမ ရတနာရွှေကြုတ် ကို ဆေးကြောလို သည် ..။ စောအောင် သည် ကုတင်ပေါ် မှောက်ရက်ကြီး နောက်တချီဆွဲရန် ခဏ နား . .အားယူနေ သည် . .။ မိုးဆမ်း . .ရေချိုးခန်းရှိရာ ကို ထမိန် ရင်လျား နဲ့ ထွက်ခဲ့ သည် . .။ မိုးဆမ်း ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ကာ သူမ စောက်ဖုတ် ကို ရေဆေး သည် . .။ လီးအကြီးစားကြီး နဲ့ လိုးတာ ခံထားတာမို့ စောက်ဖုတ် သည် ကျိန်းစပ်နေ သည် . .။ မိုးဆမ်း သည် စောအောင် ရဲ့ လီး ကို စုတ်ပေးရပြန် သည် . .။ ဒီအခါမှာ စောအောင်ကလဲ သူမ စောက်ဖုတ် ကို တချိန်ထဲမှာ ယက်ပေး သည် . .။ ဒါကို ဆစိစတီနိုင်း . .( ၆၉ ) ပုံစံလို့ ခေါ်ကြောင်း . .စောအောင် က ပြောပြ သည် . .။ ပြောင်းပြန် အိပ်ခါ တယောက်ဟာ ကို တယောက် က ယက်စုတ်ပေးကြတဲ့ ပုံစံပါ . .။ စောအောင် က မိုးဆမ်း စောက်စိ ကို ငုံကာ သကြားလုံး စုတ်သလို စုတ်နေတော့ မိုးဆမ်း . .တကိုယ်လုံး ခါနေရ သည် . .။ သုတ်တွေ ပန်းထွက်ခါ ပြီးရ သည် . .။ စောက်ပတ် တကယ် အယက်တော် တဲ့ ကိုကိုပါဘဲ . .။ စောအောင် သည် ပုံစံအမျိုးမျိုး နဲ့ မိုးဆမ်း ကို လိုး သည် . .။ တညလုံး . .လိုး သည် . .။ မိုးဆမ်း စောက်ဖုတ် သည် နာကျင် ကျိန်းစပ်နေသည် . .။ တကိုယ်လုံးလဲ နာကျင်ကိုက်ခဲနေ သည် . .။ မနက် ပိုင်း လဲ သူ့ လီးကြီး ကို စုတ်ခိုင်းပြန် သည် . .။ မိုးဆမ်း ပင်ပန်းလွန်းလို့ အိပ်ပျော်သွား သည် . .။ မိုးဆမ်း သည် ပင်ပန်းလွန်းလို့ အ၀တ်အစား ပြန် မ၀တ်ဖြစ်ဘဲ ကိုယ်လုံးတီးကြီး နဲ့ အိပ်ပျော် သွား သည် . .။ သူမ နိုးလာသောအခါ . .တယောက်ယောက် က စူးစိုက်ကြည့်နေတာ ခံနေရသလို မို့ ဘေးဘီ ကို ကြည့်လိုက်မိတော့ . .ကုတင် ဘေး ကနေ သူမ ကို ကြည့်နေသော ဦးလေး ကို တွေ့လိုက်ရပေ သည် . .။
( အို . .ဦးလေး . . .ဘာ . .ဘာလို့ ၀င်လာတာလဲ . .ကိုကို . .ကော ဟင် . . ) ကဗျာကရာ သူမ ကိုယ်တွေ ကို ဖုံးကာ လိုပေမဲ့ အနီးမှာ စောင်လဲ မရှိ . .။ ထမိန်လဲ မရှိ . .။ တစောင်းလေး ပုဇွန်ထုတ်ကွေး ပုံစံလေးနဲ့ အိပ်နေတာ ဆိုတော့ မိုးဆမ်း ဖင်တွေ နဲ့ ဖင်ကြား က စောက်ဖုတ် ကို ဦးလေး မြင်သွား တာဘဲ . .။ရှက်လိုက်တာ . .။ ( စောအောင် . .အပြင် ခဏ ထွက်သွားတယ် . .ပြန်လာမှာပါ . .မိုးဆမ်း ဦးလေး တခု ပြောမယ် . . ဘာမှ ရှက်မနေနဲ့ .ဒါတွေ က ဦးလေးအတွက် အဆန်း မဟုတ်ဘူး . . .ဦးလေး ..က မင်းတို့ ကို အစစ ကူရမှာ . .မင်းတို့ ဦးလေး အိမ် မှာ နေချင်သလောက်နေ . .စားချင်သလောက် စား . .ရတယ် . ..မိုးဆမ်း . .အိပ်ပျော်နေတော့ ဦးလေး . .၀င်လာ မိတာ . .ကဲ သွားပြီ . .ရေချိုးလိုက် အုံး . .) မိုးဆမ်း သည် စောအောင် ပြန်အလာ ကို စောင့် သည် . .။ သို့ပေမဲ့ စောအောင် သည် ပြန်ရောက်မလာ ပါ . .။ လဲ့လဲ့တင် ဆိုသော မိန်းကလေး လဲ ပြန်သွားပြီ . .။ အိမ်မှာ ဦးလေးနဲ့ မိုးဆမ်းနှစ်ယောက်ထဲဘဲ ကျန် သည် .. ။ ည ကျတော့ ဦးလေး က မိုးဆမ်း ကို ထမင်းကျွေး သည် ..။ ( ဘာမှ မပူနဲ့ . .စောအောင် ပြန်လာမှာပါ .. ငွေတွေဘာတွေ သွားဆွဲသွားရှာတယ် ထင်တာဘဲ . .) မိုးဆမ်း သည် စောအောင် ပြန်အလာ ကို စောင့်၇င်း . .စောင့်၇င်း . .အိပ်ပျော်သွား သည် . .။ ရုတ်တရက် လန့်နိုးလာတော့ . ..စောအောင်လဲ ပြန်မလာသေးသလို . .အိမ်တခုလုံး လဲ တိတ် ဆိတ်နေ သည် . .။ ဦးလေး ရှိရဲ့လား . .ဆိုပြီး ဘေးခန်းထဲ ချောင်းကြည့်မိ သည် ..။ ဦးလေး သည် ကုတင်ကြီး ပေါ်မှာ ပက်လက်ကြီး အိပ်ပျော်နေ သည် . .။ မီးကြီးလဲ လင်းလို့ . .။ ခက်တာက သူ့ အောက်ပိုင်း မှာ အ၀တ်မရှိ . .။ ပေါင်တန်တွေ ကြားမှာ အမွှေးမဲမဲ တွေ နဲ့ ဆီးခုံကြီး အောက် က လီးမဲမဲကြီး က မတ်မတ် တောင်နေ သည် . .။ မိုးဆမ်း စုတ်ရသော . .အလိုးခံရသော စောအောင် ရဲ့ လီး နဲ့ တခြားစီဘဲ .. ။စောအောင် လီး ကို ကြီးလှပြီ ထင်တာ . .ဦးလေး ရဲ့ လီး က နှစ်ဆ လောက် ပိုကြီးနေ သည် . .။မိုးဆမ်း အသာ ခြေဖေါ့နင်းကာ ပြန်လှည့်ဖို့ လုပ်တော့ . .( မိုးဆမ်း . ..) လို့ ဦးလေး လှမ်းခေါ်လိုက်လို့ တုန်သွား သည် . .။
( ရှင် . .ဦးလေး . . .) ( ဦးလေး . .ကို လာကြည့်နေတာလား . .. ) ( အို . .မ . .မ . .ဟုတ် ဘူး . .ကိုကို များ ပြန်လာမလား . .ရှာတာပါ . .) မျက်လွှာချထားပေမဲ့ တချက် ဦးလေး ဘက်ကို ကြည့်မိတော့ . .ဦးလေး သည် သူ့ လီးတန်ကြီး ကို လက် နဲ့ ပွတ်သပ်နေတာ တွေ့လိုက်ရလို့ မိုးဆမ်း . .ခေါင်းငုံ့ချလိုက်မိ သည် . .။ ( မရှက်ပါ နဲ့ မိုးဆမ်း ကလဲ . .အချင်းချင်းတွေ ဘဲ . .ဒို့ တအိမ်ထဲနေကြတာ . .ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့ . .ဦးလေး လဲ မိုးဆမ်း မှာ မှဲ့နက်လေး ရှိတာ သိနေပြီ လေ . .) ( ဟင် . .အို . .) မိုးဆမ်း ရဲ့ ရတနာ ရွှေကြုတ် ဖေါင်းဖေါင်းမို့မို့ကြီး မှာ မှဲ့နက်ကလေး ရှိတာကို ဦးလေး သိနေပြီ . . .။ ရှက်လိုက်တာ . .။ မိုးဆမ်း ပြေးထွက်ခဲ့ သည် . .။ မနက် အစောကြီး သေးပေါက်ချင်လို့ ရေချိုးခန်းကို ပြေး သည် . .။ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် . .ထမိန်မကာ သေးပေါက်နေဆဲ . .တံခါး ကျွီကနဲ ပွင့်လာပြီး ဦးလေး ၀င်လာ သည် . .။ ( အို . .ဦးလေး . ..မိုးဆမ်း . .သေး . .ပေါက်နေတာ . .) (အာ . .အေး..ပေါက် . .ပေါက် . .ဦးလေး လဲ ပေါက်မလို့ . .) အို . .. ဦးလေး သည် ကိုယ် တုံးလုံးကြီးပါ လား . .။ လီးကြီး က မတောင်ပေမဲ့ တွဲလောင်းကျနေတာတောင် အရှည်ကြီး . .တုတ်တုတ်ကြီး . .။ မိုးဆမ်း ထမိန် ကို ဖုံးလိုက်ပေမဲ့ ဦးလေး က မြင်ပြီးနေပြီ . .။ ( မိုးဆမ်း . .) ( ရှင် . .ဦးလေး ...) ( မိုးဆမ်း က အမွှေး ရိပ်တာလား . .နဂို မပေါက်တာလား . .) ( အို . .ဦးလေး ကလဲ . . .) ( မရှက်ပါနဲ့လေ . .ဘယ်သူမှ သိတာ ကြားတာမှ မဟုတ်တာ . .ဦးလေး နဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ ဘဲ . .) ( ဟို . .ဟို . .) ( ထရင်းမ် ( ညှပ် ) တာ လား . .) ( ဟုတ် . .ဟုတ်ကဲ့ . .) ( လှတယ် . .) ( ရှင် . .) ( အော် . .မိုးဆမ်း . .အဖုတ်လေး က လှတယ် လို့ . .) ( ဟာ . ဦးလေး ကလဲ . ..) မိုးဆမ်း ရှက်ပြီး တဖက်ခန်း ကို ထွက်ပြေး သည် . .။ ဘယ်လို လူကြီး လဲ . .။ နှာဘူးကြီးပါလား . .။ကိုယ့်တူ ရဲ့ မိန်းမ ကို မရိုးမသား . .နသားပါရား လုပ်ချင်နေ သည် . .။ ခက်တာ က စောအောင် က ပြန်လဲ မလာသေးဘူး . .။ သူ့ အိမ် မှာ နေရတော့ သူ့ကို . .စိတ်လဲ မဆိုးရဲဘူး . .။ သူ့ လီးကြီး ကလဲ မဲမဲကြီး . .။ အို . .ဘာလို့များ . .သူ့ လီးကြီးကို သတိရသွားပါ လိမ့် . .။ နောက်တနေ့ မနက် မှာ ဦးလေး က သတင်းစာ ကို ပြ သည် . .။ ဟင် . . မိုးဆမ်း မိဘတွေ က သမီးအဖြစ် က စွန့်ပစ် တဲ့ ကြောငြာ . ..။ စောအောင် ကလဲ ဘယ်ဆီ ရောက်နေမှန်း မသိ .. ။ မိုးဆမ်းတော့ ဒီ ဦးလေး ရဲ့ အိမ်မှာ တယောက်ထဲ သောင်တင်နေပြီ . ..။ မိုးဆမ်း မျက်ရေတွေ ပါးပြင်ပေါ်ကို စီးကျလာ သည် . .။ မိုးဆမ်း ငိုတော့ ဘေးက ကြည့်နေတဲ့ ဦးလေး က ..( အို . .မိုးဆမ်း . . မငိုပါနဲ့ ဟာ . သီးလေး . .မိုးဆမ်း ငိုတော့ စိတ်မကောင်းဘူး . .) ဆိုပြီး မိုးဆမ်း ကို ဖက်လိုက် သည် . .။ မိုးဆမ်း လဲ စောအောင်ကလဲ ပြန်မလာ . .မိဘကလဲ အမွေဖြတ် စွန့်ပစ် . ဘာဆက်လုက်ရမလဲ မသိတော့ အရမ်း ၀မ်းနည်း သည် ..။ ဦးလေးရဲ့ ရင်ခွင်ထဲ ခေါင်းထိုးကာ ငိုနေမိ သည် . .။ ဦးလေး က မိုးဆမ်းကျောလေး ကို ပွတ်ပြီး ချော့ သည် .. ။ ( မငို နဲ့ မိုးဆမ်း . .ဦးလေးတယောက်လုံး ရှိတယ် . .မိုးဆမ်း . .ဘာမှ အားမငယ်နဲ့ . ဦးလေး . .မိုးဆမ်း ကို အစစတာဝန်ယူမယ် . .) မိုးဆမ်းသတိမေ့နေတာ က သူမ သည် စောစော က ရေချိုးအပြီး တီရှပ် ၀တ်တုံး က အထဲ က ဘရာ မခံမိဘူး . .။ အခု ဦးလေး က ဖက်ထားတော့ မိုးဆမ်း နို့တွေ သာ ဦးလေး ရင်ဘတ်ကြီး မှ ပိပြားနေပြီ . .။ နို့တွေ က တင်းမာကော့ထောင်နေတော့ ဦးလေး သည်သူ့ ရင်ဘတ်ကြီး နဲ့ ထိနေသော နို့သီးလေးများ ရဲ့ အထိအတွေ့ကို ပါ သိနေသည် . .။ ဦးလေး ရဲ့ ဖွါးဖက်တော်ကြီး သည် မတ်မတ် တောင်လာပြီ . .။ ( ဦးလေး . .) ( ဟင် . .မိုးဆမ်း . . ) ( ကိုကို က ပြန်မလာတောာ့ဘူးလားဟင် . .ဦးလေး ဘာကြားသေးလဲ . .) ( ဦးလေး ကြားတာကတော့ သူ လဲ သမီးလိုဘဲ . .မိဘ က မောင်းထုတ် အမွေဖြတ်လိုက်တယ် ဆိုတာပါဘဲ . .) ( အို . .အဟင့်အဟင့် . .အီး . . .မိုးဆမ်းတို့တော့ ကိုယ်ကျိုးနဲပါပြီ ရှင် . . ) ( အို . .သမီးရယ် . .မငိုပါနဲ့ ကွာ . .သမီး ငိုတော့ ဦးလေး အရမ်း စိတ်မကောင်းဘူး . .) ဦးလေး သည် မိုးဆမ်း ကျောပြင်လေး ကို ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးနေရာ က ဖင်ကားကားလေး ဆီ လက်ဖ၀ါးကြီး က ရွေ့လျားလာ ပြီး ဖင်သားအိအိကြီးတွေ ကို ပွတ်နေသည် . .။ မိုးဆမ်း လဲ ဦးလေး လက်တွေ က သူမ ဖင်တုံးတွေ ကို ကိုင်တွယ်နေတာ သတိပြုမိလာသလို ဦးလေးရဲ့ မာကျောတဲ့ ပေါင်ကြားက ဒုတ်ကြီင်္း ကလဲ ၀မ်းပြင်သားမှာ အရှည်လိုက်ကြီး ထိကပ် မိနေလို့ လူချင်း အသာ ခွါဖို့ ကြိုးစားလိုက် သည် ..။ ဦးလေးရဲ့ သန်မာတဲ့ လက်တွေ က သူမ ကို ခွါခွင့်မပေး . .။ ( မိုးဆမ်း . .) ( ရှင် . .ဦးလေး . .) ( မိုးဆမ်း . စိတ်မညစ်ပါနဲ့ကွာ . .) မိုးဆမ်း ဦးလေး ပခုံးထက်မှာ ခေါင်းလေးမှီထားလိုက် သည် . .။ ဦးလေး လက်တွေ ကတော့မိုးဆမ်း ရဲ့ တင်းကားနေတဲ့ ဖင်သားတွေ ကို ဆုတ်နယ်နေ သည် . .။ ( ဦးလေး တယောက်လုံးရှိတယ် . ..မိုးဆမ်း . .အတွက် ဦးလေး တာဝန်ယူတယ် . .) ( ကျေးဇူးတင်ပါတယ် . .ဦးလေးရယ် . .. )
စောအောင် သည် တပတ်ကြာလဲ ပြန်ရောက်မလာတော့ ပါ . .။ ဦးလေး ဈေးသွားခိုက် မိုးဆမ်း သည် သုန်ငယ့် ဆီကို ဖုန်းဆက် ကြည့် သည် . .။ သူ့ ကို စောအောင် နဲ့ အရမ်းဖြစ်စေချင်သော သုန်ငယ် သည် အခုတော့ သူ့ ကို အပြစ်တင်နေ သည် . .။ မိုးဆမ်း တော်တော် ၀မ်းနည်း သွား သည် . .။ နောက်ဆုံး သုန်ငယ် ပြောလိုက်တဲ့ စကား က မိုးဆမ်း နားထဲကို သံရေပူပူ တွေ လောင်းချ လိုက်သလို ခံစား လိုက် ရ သည် . .။ သုန်ငယ် က စောအောင် သည် ပြန်လာမှာ မဟုတ်တော့ဘူး . .တဲ့ . ။ စောအောင် သည် အသစ်တယောက် နဲ့ တွဲနေပြီ . .ဆိုတာပါဘဲ . .။ အို . .ယုတ်မာလိုက်တာ . .။ မင်းသားခေါင်းဆောင်းတဲ့ ဘီလူး နဲ့ တွေ့လိုက်ရတာဘဲ . .။ လီယိုနာဒို ဒီကာပရို နဲ့ တူတဲ့ စောအောင် သည် သူ့ ကို ကျောရရုံကြံ ပြီးသူ့ ဦးလေး ၀မ်းကွဲဆိုတဲ့ လူကြီး လက်မှာ ထားခဲ့ပြီး လစ်လေ ပြီ . .။ တကယ်တော့ ခုလို ခိုးပြေးကြရတာ မိုးဆမ်း အိမ် မပြန်ရဲတော့လို့ ပါ . .။ စောအောင် က ခိုးမပြေးလိုဘူး . .ဆိုတာ မိုးဆမ်း ပြန် သတိရလေ သည် . .။ အခုတော့ မိုးဆမ်း ရဲ့ အပျိုစင် ပန်းကလေး ကို စောအောင် . .ချေမွသွားခဲ့ ပြီ ..။ မိုးဆန်း ရဲ့ ပါကင်လေး ကို သူ ဖွင့်သွားခဲ့ သည် . .။ အပေါ်ကလဲ တက်ဆောင့်ပေးရ သည် . .။ခိုးပြေးလာပြီး ဦးလေးရဲ့ အိမ် ကို စရောက်တဲ့ ည က တညလုံး . .စောအောင် သည် မိုးဆမ်း ကို တချီပြီးတချီ ဘဲ လိုးလိုက်တာ . .မိုးဆမ်း မှာ အရှက်ကုန်ရသည်..။ ဖင်တွေ ကို အပြောင်သားနဲ့ ထောင်ကုန်း ပေးခဲ့ရ သည် . .။ တော်တော် ရက်စက်တဲ့ ကောင် . .။ မိဘတွေ ကလဲ အမွေဖြတ် စွန့်လွှတ်လိုက် သည် . .။ မိုးဆမ်း တော့ သောင်ပြင်လွှတ်တဲ့ ခွေး ဖြစ်ပြီ . .။
မိုးဆမ်း ငိုနေ သည် . .။ အိပ်၇ာထဲမှာ ငိုနေရုံကလွဲပြီး မိုးဆမ်း ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ . .။ ( မိုးဆမ်း . .) ဦးလေး သည် အိမ်ရှေ့ခန်းမှာထိုင်ပြီး အရက်သောက်နေ သည် . .။ ( ရှင် . .) ( လာခဲ့ အုံးလေ . .တယောက်ထဲ ဘာ လုပ်နေတာလဲ . .) မနေ့ က မနက် အစေကြီး မိုးဆမ်း သေးထပေါက်တော့ ဟိုတနေ့ကလိုဘဲ မိုးဆမ်း ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် ကာထမိန်မပြီး . .သေးပေါက်နေတုံး . .ဦးလေး သည် ပုဆိုးမပါ ဗလာ အောက်ပိုင်းနဲ့ . .လီးကြီး က တောင် လို့ ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်လာ သည် . .။ သူ့ လီးကြီး က အကြောတွေ အချောင်းလိုက် ထောင်ထနေ သည် . .။ မဲမဲ တုတ်တုတ်ကြီး . .။ ဂွေးစိတွေ က တွဲလောင်းကျနေပြီး သူ လမ်းလျောက် တဲ့ အခါ လှုပ်ရမ်းနေကြ သည် .. ။ ဒါကြီးနဲ့ များ အလိုးခံလိုက်ရရင် . .အို . .မိုးဆမ်း မတွေးရဲအောင်ပါဘဲ . .။ စောက်ပတ်များ ကွဲသွားလေ မလား . .။ မိုးဆမ်း သည် ထမိန် ကို မတင်ထားလို့ ဖင်ဖွေးဖွေးတွေ ပေါ်နေသည် . .။ ဦးလေး သည် သူ့ လီး ကို မိုးဆမ်းမြင်အောင် ခဏခဏ ပြနေသလား မသိပါ . .။ မိုးဆမ်း ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်ဖို့ ဦးလေး အနား က ဖြတ်ရ သည် . .ဦးလေး သည် သူ့နဘေး ကကပ်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်တဲ့ မိုးဆမ်း လက်ကို ဖမ်းဆွဲထားလိုက် သည် . .။ ( နေအုံး . . .) ( ဦးလေး . .) ( ထိုင် . .ထိုင်လိုက် . .) ( ရှင် . .) မိုးဆမ်း ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်ချလိုက် ရ သည် . .။ ( ဦးလေး ကို စုတ်ပေးစမ်း . .) သူ့ လီးကြီး ကို မိုးဆမ်း ပါးစပ်နား ထိုးပေး သည် . .။
( မိုးဆမ်း မစုတ်ချင်ဘူး . .) ( အော် . .ဒီလိုလား . .မိုးဆမ်း . .စုတ်ခိုင်းရင် စုတ်မှပေါ့ . .လာ . .အိပ်ခန်းထဲက လိုက်ခဲ့ ဦးလေး ပြမယ် . .) မိုးဆမ်း လက် ကို ဆွဲကာ ခေါ်သွား သည် . .။ ဦးလေးရဲ့ ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ အညိုရောင် စက္ကူအိတ် တအိတ် . .။ ( ကြည့်. .ဒီမှာ . .ဘာ ပုံတွေ လဲ . .) ( အို . .) မိုးဆမ်း စောအောင် ကို လီး စုတ်ပေးနေတဲ့ ပုံများ . . ဖြစ်နေ သည် . .။ မိုးဆမ်း မျက်နှာ ကို အနီးကပ် ရိုက်ထား သည် . .။ ဘယ်တုံးကများ ရိုက်လိုက်မှန်းတောင် မသိလိုက်ပါ လား . . ။ ( ဒါတွေ ငါ အင်တာနက် မှာ တင်လိုက်၇င် နိုင်ငံကျော် သွားမယ် . .သိလား . .ဒါကြောင့် စုတ်ခိုင်းရင် စုတ် . .ပဲမများနဲ့ . .) ( ဟုတ် . .ဟုတ်ကဲ့ . .) မိုးဆမ်း ဦးလေးရဲ့ အရှေ့မှာ ဒူးလေးထောက်ပြီး ဦးလေးရဲ့ လီးတန်ကြီး ကို စုတ်ပေးရပါတော့ သည် . .။ စုတ်နေတုံး . .ဦးလေး က ( မိုးဆမ်း . .အ၀တ်တွေ အားလုံး . .ချွတ်လိုက် . .) လို့ အမိန့်သံပါပါ နဲ့ ခိုင်း သည် . .။ မိုးဆမ်း သည် သူ့ လီးကြီး ကို စုတ် ပေးရင်း . .အ၀တ်တွေ ကို ချွတ်ရ သည် . .။ ( ဟား . .လှလိုက်တဲ့ နို့တွေ . .) သူ့ လီးကြီး သည် ငံကျိကျိ ..ချဉ်စုတ်စုတ် နဲ့ ပေမဲ့ မိုးဆမ်း သည် သူ့ ကို မငြင်းရဲတော့ . .။ စုတ်ပေးရလေ သည် . .။ ( လျာ နဲ့ ယက် . .မိုးဆမ်း . .) တပြတ်ပြတ် နဲ့ ယက်ပေးနေတဲ့ မိုးဆမ်း ပါးစပ်ထဲ ကို လီးကြီးနဲ့ ထိုးထိုးညှောင့်နေပြီ . .။ ( ဒစ်ကြား ကို လျာ နဲ့ ထိုး . .ဟုတ်ပြီ . .ကောင်းတယ် . .)မိုးဆမ်း သည် သူ ခိုင်းတဲ့ အတိုင်း . .လုပ်ပေးနေ သည် .. ။
ဦးလေး သည် မိုးဆမ်း စုတ်တာ ကို ကြိုက်ပုံ ရ သည် . .။ ( ကောင်းလိုက်တာ မိုးဆမ်းရယ် . .. ) ဦးလေး ကို ဖိဖိ စုတ်ပေးလိုက်တာ ဦးလေး ပြီးသွား သည် .. ။ မိုးဆမ်း ပါးစပ်ထဲမှာ ပြီးသွား သည်. .။ ( အား . . .ကောင်း လိုက်တာ မိုးဆမ်းလေးရယ် . .. ) အခုလဲ ခေါ်နေပြန်ပြီ . .။ လီးစုတ်ခိုင်းမလို့ နဲ့ တူ သည် . .။ အပြင်ခန်း ကို ထွက်လာတော့ ဦးလေး သည် အရက်ပုလင်းထောင်နေသည် . .။ ( မိုးဆမ်း . .စိတ်ညစ်လား . .) ( ဟုတ် . .ဟုတ်ကဲ့ . .) ( လာ . .အရက်သောက်မလား . ) ( ဟင့်အင်း . .) ( ထမင်း လဲ မစားပါလား . .လာ . .ဦးလေးအနား . .) ဦးလေး မိုးဆမ်း ကို ဖက်ထားပြီ . .။ ( ဦးလေးကို မိုးဆမ်း နှိပ်ပေးမလား ဟင် . .) ( ဟုတ်ကဲ့ ဦးလေး . .) ( အင်းနေအုံး . .လီး အရင် စုတ်ပေးအုံး . .) ( ဟုတ်ကဲ့ ဦးလေး . . ) ဦးလေး အလိုကျ သူ့ လီးကြီး ကို မိုးဆမ်း စုတ်ပေးရပါ သည် . .။ ဒီတခါမှာတော့ . .ဦးလေး သည် ပါးစပ်ထဲမှာ မပြီးလိုဘူး . .။ ( မိုးဆမ်း စောက်ပတ်ထဲမှာ သုတ်တွေ ပန်းထုတ်ချင်တာ . .) ဦးလေး သည် မိုးဆန်း ကို ဖင်ထောင်ကုန်းခိုင်းပြီး အနောက်ကနေ လိုးပါတော့ သည် . .။ဦးလေးရဲ့ လီးကြီး ဟာ တော်တော် ရှည် သည် . .။ ( တကယ်ဆို ဦးလေး က မိုးဆမ်း ကို အရင် လိုးချင်တာ . ဟို ကောင် . .စောအောင် လိုးသွားတယ် . .မိုးဆမ်း ရဲ့ ပါကင် စောက်ပတ်လေး ကို ဦးလေး ဘယ်သူ့ မှ မလိုးခင် လိုးချင်တာ . .) ( ဆောရီးဘဲ ဦးလေးရယ် . .မိုးဆမ်း ပါကင် မဟုတ်တော့တာ . .) ( စိတ်မပူပါနဲ့ မိုးဆမ်း . .မိုးဆမ်း မှာ ပါကင် ဖွင့်စရာ တခု ရှိနေသေးတယ် . .) ( ရှင် . .ဘယ်မှာ . .) ဦးလေး က မိုးဆမ်း ရဲ့ စအိုဖင်ပေါက်လေး ကို လက်ညှိုးနဲ့ပွတ်ပြလိုက် သည် . .။
( ဒီဖင်ပေါက်လေး က ပါကင်တခုပေါ့ . .မိုးဆမ်း . .) ( အို . .မိုးဆမ်းဖင် ကို လိုးမလို့လား ဦးလေးရယ် . .) ( အင်း . .) ( စောက်ဖုတ် ကို ဘဲ လိုးပါ ဦးလေးရယ် . .နော် . .နော် . .) ( မိုးဆမ်း . .နင့်မှာ ငြင်းပိုင်ခွင့် မရှိဘူးနော . .) ( ဟုတ်ကဲ့ပါ ဦးလေး . . ) ဦးလေး သည် မိုးဆမ်း ကို ဖင်ထောင်ကုန်းတဲ့ ပုံစံ နဲ့ တအားလိုးဆောင့်ပါတော့ သည် . .။ ( ကောင်းလိုက်တဲ့ စောက်ပတ် . .)